Tag: famolavolana mailaka | Martech Zone
Tag: famolavolana mailaka
Misy antony ny ankamaroan'ny orinasa mikasa ny handany fotoana sy vola bebe kokoa amin'ny marketing amin'ny mailaka amin'ny 2016: ny marketing amin'ny mailaka dia mitazona ROI avo indrindra amin'ny fantsom-barotra nomerika rehetra. Ny mpivarotra rehetra dia manana ny lisitry ny serivisy mailaka tiany sy ny lisitry ny fampandrosoana ny mailaka. Saingy matetika loatra dia tsy raharahain'izy ireo ny votoatin'ny fampielezan-kevitra: manandrana ny mailaka ataon'izy ireo amin'ny fitaovana sy mpanjifa marobe alohan'ny hametrahana ny fampielezan-kevitra. Na dia fanentanana fitsapana maro aza amin'ny fandefasana mailaka
Miankina amin'izay anontanianao, ny mailaka dia teo anelanelan'ny 30 sy 40 taona. Mazava ny hasiny, miaraka amin'ireo fampiharana manerana ny lafiny sosialy sy matihanina amin'ny fiainana. Ny hita ihany koa anefa dia ny teknolojia mailaka efa antitra. Amin'ny lafiny maro, averina alefa ny mailaka mba hijanona ho manan-danja hatrany amin'ny filan'ny mpampiasa ankehitriny. Fa isaky ny inona no azonao atao ny mifampiresaka zavatra alohan'ny hiainanao fa efa lasa ny fotoana?
Zoma, Septambra 25, 2015 Zoma, Septambra 25, 2015 Douglas Karr
Nampiasa ny fametrahana ny boaty fampidirana avy amin'ny 250ok izahay, ary nanao fitsapana roa volana lasa izay izay namerenenanay ny làlan-kevitry ny mailaka. Tsy nampoizina ny valiny - nitombo mihoatra ny 20% ny fametrahana ny boaty fampidirana ao amin'ilay lisitra voa noforoninay. Ny zava-misy dia ny fanandramana mailaka dia mendrika ny fampiasam-bola - toy ireo fitaovana manampy anao ho tonga any. Alao an-tsaina hoe ianao no laboratoara tompon'andraikitra ary mikasa ny hanao fanandramana be dia be ianao